Snapdragon 820 Chip Nijanona AnTuTu Breaking Records | Androidsis
Rehefa nambara ilay puce Snapdragon 820 vaovao dia nanontany tena isika rehetra raha amin'ity taona ity aho dia tsy hanao ny hadisoana lehibe indray izay nihevitra fa ny hazakazaka meteorika dia nosakanan'ilay Snapdragon 810 tonga tamina olana lehibe teo amin'ny mari-pana rehefa nosedraina. Ny iray amin'ireo tena voa mafy indrindra dia ny HTC miaraka amin'ny One M9 izay nanana an'io puce io tao anaty vavony, izay nanjary nahazo tsikera lehibe kokoa, satria finday avo lenta nigafana be io. Ka tamin'ity taona 2015 ity dia tsy maintsy niandry ny famerenana fanindroany ny Snapdragon 810 isika, hahitantsika azy izao tena mandeha tsara ao amin'ny Xperia Z5.
Ka ny chip vaovao Snapdragon 820 dia natomboka vao herinandro lasa izay, mitondra ny andraikitra rehetra hamerina amin'ny toeran'ny mpitarika izay notehirizin'i Qualcomm talohan'ny nahatongavan'ny 810. Araka ny valiny nomena avy amin'ny fitaovana benchmarking AnTuTu dia nahatratra isa 131.648, izay manapotika ireo rakitsoratra rehetra hita teo aloha. Ity valiny ity dia tratra noho ny prototype smartphone izay manana vahaolana QuadHD, RAM 3 GB, fitehirizana anatiny 64 GB ary fakantsary aoriana 21 MP. Azontsika atao koa ny milaza fa miverina amin'ny fahefana i Qualcomm.
1 Smartphone sy tablette 60 miaraka amin'ny Snapdragon 820
2 Fiovana lehibe tamin'ny 820
Smartphone sy tablette 60 miaraka amin'ny Snapdragon 820
Qualcomm dia namoaka ny tena mety amin'ny chip vaovao ary nilaza fa tsy latsaky ny 60 ny telefaona sy ny takelaka hampiditra azy amin'ny taona ho avy. Iray amin'ireo fitaovana ireo dia ho Galaxy S7 tsy ho ela, ka rehefa natomboka avy tao AnTuTu ny mari-pahaizana isa, dia naneno ireo fanairana.
Ny Snapdragon 820 dia dingana lehibe mandroso ho an'ity mpanao chipmaker ity, ka midika izany fa azy ireo fikirakirana voalohany miaraka amina maritrano manokana, ary ny filokana lehibe voalohany taorian'ny olana dia ny Snapdragon 810 tamin'ity taona ity. Ny 810 dia noheverina ho tetezana eo anelanelan'ny chip A64 7-bit an'i Apple miaraka amina fotony manokana, ka naka ny ARM Cortex-A57 cores ary nametraka azy ireo tamina processeur 20nm, izay niteraka fanamby mafana.
Nanjary Spandragon 810 ity izay voatery nopetahana ny elany mba hialana amin'ny hafanana be, vokatr'izany ny fahombiazany dia nifanaraka tamin'ny chips hafa satria izy ireo no 805 na 801. Eto dia azontsika fantarina ny antony nisy terminal maro izay nifarana tamin'ity taona ity tamin'ny alàlan'ny fitondrana ny 801.
Fiovana lehibe tamin'ny 820
Snapdragon 820 vaovao chip iray manana kryo Kryo manokana izy io, rafitra sary mahery vaika tokoa Ary natsangana tamin'ny andiany faharoa 14nm izy io, noho izany ny olana momba ny hafanana be loatra dia zavatra taloha. Izany dia efa fantatra noho ny fitsapana natao tamin'ny taona 820 izay tsy nanamorana be loatra azy io na oviana na oviana raha toa ny nampoizina ny fampisehoana.
Ny fitsapana natao tamin'ny 820 dia fintinina ao anaty puce iray izay mampiasa 30% ny angovo kely noho ny 810, misaotra an'io fanovana ho 14nm io. Raha ny fahombiazan'ny zava-bita, ny Kyro core dia fanatsarana lehibe kokoa noho ny core Cortex-A57 ao amin'ny Snapdragon 810, izay mety hanala ny core an'ny A9 Twister an'i Apple aza, afa-tsy amin'ireo toe-javatra izay iharan'izy ireo enta-mavesatra marobe.
Aiza ny ny qualitative leap dia eo amin'ny fampisehoana sary an'ny Snapdragon 820 miaraka amin'ny Adreno 530 GPU vaovao, izay hampirisika antsika hanatona fanandramana vaovao amin'ny lalao amin'ny lalao video izay hanararaotra an'ity chip vaovao ity.
Tombony iray hafa amin'ny 820 dia ao amin'ny mpanera fitadidiana izay mamela avo roa heny ny fahombiazan'ny teo alohany amin'ity lafiny ity, data be dia be no mety mikoriana amin'ny alàlan'ny rafitra fandefasana sary sy ny mpikirakira mari-pamantarana sary amin'ny fotoana iray, mety hametraka azy io ho toy ny chip tonga lafatra ho an'ny lalao video avo lenta sy streaming ary fandraisam-peo 4K
Biby volontsôkôlà iray manontolo izay saika mampitombo ny fampisehoana ny sainan'i Samsung amin'izao fotoana izao miaraka amin'ilay Exynos 7420. Ka ankehitriny dia tsy maintsy miandry ireo famoahana izay ho tonga amin'ny Samsung Galaxy S7 izay mety hamafiso izay hita tao amin'ireo mari-pahaizana ireo vita amin'ny AnTuTu.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny puce Snapdragon 820 vaovao dia mamaky ny marika efa misy rehetra ao amin'ny AnTuTu miaraka amin'ny isa 130.000
Arturo Murcia Pardo dia hoy izy:
Tiako ny mikasika anao
Valiny tamin'i Arturo Murcia Pardo
Alexandre mateus dia hoy izy:
Tiako izany, Smartphone Bluboo ho fanomezana amin'ity Krismasy ity ary avy amin'ny tanan'ny androidsis, a, andao hojerentsika raha azoko koa ilay Fat. 😉
Valiny tamin'i Alexandre Mateus
Placeholder sary Angel Angel Perez Vega dia hoy izy:
Mitovy amin'ny iphone 6s plus misy ahy ary izany dia fotony roa amin'ny 1,8 ghz miaraka amin'ny 2 ram ddr4. Ny rindrambaiko no mahasamihafa azy
Valiny tamin'i Miguel Angel Perez Vega